www.google.co.mm(Myanmar Unicode Version) - MYSTERY ZILLION
www.google.co.mm(Myanmar Unicode Version)
အရင်တုန်းက ကိုစည်သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ Project လေးတစ်ခုရှိတယ်။
Open Source (http://www.mysteryzillion.org/forumdisplay.php/70-Open-Source)
အဲဒါက Google ကို မြန်မာလို ပြန်တဲ့ဟာပါ။ မြန်မာ ၀ီကီ တို့နဲ့ အတူ ပေါ်လာတဲ့ ပရောဂျက်ပေါ့ဗျား။ ဒါပေမယ့် ၀ီကီအတိုင်းပဲ သူလည်း unicode ပြသာနာ။ အခုရိုက်ထားတာတွေလည်းရှိပါတယ် အခုလောလောဆယ် ပြီးနေတဲ့ စာရင်းကတော့......
Main Search Site 93%
Google Map Maker 10%
Google Weather 44%
Groups UI 7%
Orkut FE Templates 2%
User Distributed Search 100%
Video and Video Search Front End 55%
Video Disapproval Emails 45%
Video Player - Flash 91%
Video Uploader Front End 13%
Zipit Frontend - displaying user reviews, 100%
အောက် ကဆိုရင် လုံး၀ပြီးသွားပါပြီ ဒါပေမယ် ့ကျွန်တော်သိချင်တာက တကယ်လို့ www.google.co.mm ဟာ မြန်မာ ယူနီကုတ်နဲ့ ပြီး သွားရင် သုံူးဦးမှာလား၊
အဲဒါလေးသိချင်လို့ Poll လေးလုပ်ထားပါတယ်။
BAD REQUEST ပြနေတယ်... အစ်ကိုပေးတဲ့ Link ကဖွင့်လို့မရဘူးကော? Unicode နဲ့သုံးတာကိုတော့ကြိုက်ပါတယ်. ဒါပေမယ့် တခြား သူတွေကောကြိုက်ပါ့မလား? Unicode ကျတော့ Unicode သွင်းထားတဲ့သူလောက်ပဲ အဆင်ပြေမှာလေ... ? ကျွန်တော်လည်း သေချာမပြောတတ်ဘူး ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Google ကို MM နဲ့သုံးရမယ်ဆိုတာကိုတော့ ကြိုက်တယ်ဗျို့ . ခွိခွိ
ကျနော်လည်း Google ကိုမြန်မာကိုသုံးချင်တာကကြာပါ့... ဘယ်အချိန်လောက် www.google.com.mm ဆိုပြီး သုံးရမလဲ... အင်း.... မသေခင်လေးတော့ သုံးရမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်... :P
OS ကိုလည်း ၀င်းဒိုးစ်ဖြစ်ဖြစ် လင်းနစ်ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာလိုလေးသုံးနိုင်ရင်ကောင်းသား....
အရင်ဆုုံး Google.com.mm ကိုု MPT ကနေ ဘယ်လိုု ၀ယ်မလဲ ? =D
and .. this translation is the same with ko lionslayer's translation ?
သုံးတောင် မသုံးကြည့်သေးပဲ ဘယ်လိုလုပ် မသုံးဘူးသုံးမယ် ပြောလို့ရမလဲ
အဆင်ပြေရင်တော့ သုံးကြမှာပေါ့ မဆင်မပြေတော့မသုံးဘူးပေါ့
မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ Google က အကုန်လုံး က Font မမြင်ရတဲ့ Myanmar Unicode တွေနဲ့ချည်းပဲ။ အင်တာနက်ဆိုင်တွေ အကုန်လုံးက စေတနာအရင်းခံပြီး ခေါင်းရှုပ်ခံပြီး ဘယ်သူမှ Myanmar Unicode မထည့်ပေးပါဘူး။ အကုန်လုံးဇော်ဂျီပါပဲ။ တကယ်သုံးချင်ပါသော သူများက အိမ်က Memory Stick ကိုယူလာ။ ပြီးတော့ Myanmar Unicode ကိုသွင်း ပြီးတော့ Restart ချရဦးမယ်။ တစ်ချို့ဆိုင်တွေက Restart ချခွင့်တောင်မပေးဘူး။ ကဲ Restart ချလို့ပြီးသွားရင် ရလာပါပြီ မြင်ရပါပြီ www.google.co.mm သူဘာရှာမလဲ။ တော်ကြာ အဲဒါ ပြီးသွားလို့ မနာလိုတဲ့လူတွေ ထောင်လိုက်လို့ အထက် က Google ကို တရုတ်ပြည် ကလို လိုင်စင်မပေးရင်ရော၊ သူဘာတက်နိုင်ဦးမလဲ။ Google ကတော့ မြန်မာ ယူစာတွေ အတွက် အထူးတလည် လာပြီးဖြေရှင်းပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော်ဒီပိုစ်ကိုတင်တာ လူတွေ မြန်မာယူနီကုတ် ကိုဘယ်လောက်သုံးချင်ကြသလဲ ဆိုတာလေးလည်းသိချင်လို့တင်လိုက်တာပါ။ ကိုစည်သူ အရင် တုန်းကပြောဖူးပါတယ်။ မင်းတို့ ဇော်ဂျီနဲ့ ရိုက် ပြီးရင် ငါ Converter နဲ့ ပြန်ပြောင်းပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် သုံးမယ့်လူဘယ်နှစ်ယောက် ရှိမလဲ။ ကျွန်တော်တို့က တော့ ညအိပ်ရေးပျက်ခံပြီးရိုက်မယ်။ ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်မှာ အင်တာနက် သုံးတဲ့ လူတွေ သောင်းချီ သိန်းချီရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် www.google.co.mm ကိုသုံးမယ့်လူ သုံးယောက်တောင်မရှိဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လုပ်တာ အလကားဖြစ်သွားပြီပေါ့။ အလကားနေရင်း ဟိုစီးပွားရေးမကောင်းတဲ့ Google ကို တမင်သတ်သတ် ဆာဗာ တစ်ခုပိုထောင်လိုက်သလိုဖြစ်သွားမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုလည်း မသုံးဘူး။ ယူနီကုတ် သွင်းပြီးရင် အရမ်းစိတ်ညစ်ရလို့။
ကျွန်တော်လည်း အရင်တုန်းက ယူနီကုတ်ကို စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ ဟိုတစ်နေ့က ငါရိုက်ရင် ကောင်းမှာပဲ ဆိုပြီးူ ယူနီကုတ်ကို ဒေါင်းလုတ် ချ ပြီးတော့ restart လုပ် ပြီးတော့ ကျွန်တော်စမ်းရိုက်ကြည့်တယ်။ အဆင်တော့ပြေတယ်။ ကျွန်တော်ထမင်းစားသွားတော့ ဆိုင်က ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော့်စက်မှာ ထိုင်ပြီးသုံးခိုင်းတာ။ သူငိုချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်။ ဘာတွေမှန်းမသိဘူးတဲ့။ ဘယ်လိုရိုက်ရမှာလဲတဲ့။ သူဆက်မလုပ်တက်တော့ဘူး ဆိိုပြီး ဒီစက်ကို ယူနီကုတ်ထည့်ထားရင် မကိုင်တော့ဘူးဆိုပြီး ဖြစ်သွားတယ်။
ကျွန်တော်လည်းပြန်ရောက်တော့ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။ ပြောတော့ပြောလိုက် တယ် အဲဒါ မြန်မာယူနီကုတ်ပါလို့။
Sanction ရှိနေသးသမျှ Google.com.mm ဆိုုတာ ရှိလာမှာမဟုုတ်သလိုု Google ကလည်း မြန်မာနိုုင်ငံမှာ Invest လုုပ်ဖိုု့စိတ်၀င်စားမယ်မဟုုတ်ပါဖူး ။
ပြီးတော့ Myanmar Unicode ကိုသွင်း ပြီးတော့ Restart ချရဦးမယ်။
Zawgyi က restart မချရဖူးထင်တယ်ဗျ , တော်တော် အဆင်ပြေတာပဲဗျနော် heh ?
Search Engine တစ်ခုုဟာ သူ့ဟာသူ ဘာနဲ့လုုပ်ထားလုုပ်ထား ကိုုယ်က ဘာကြီး ရိုုက်ထည့်ထည့် သူ ရှာပေးနိုုင်တာ သူ Indexing လုုပ်ထားတာ crawl လုုပ်ထားတွေကိုု ပြန်ပြပေးမှာပဲ
Standard သည် Standard ပါ .. User သည် သူ့ဟာသူ Standard ကိုု သုုံး သုုံး မသုုံး သုုံး follow လုုပ်လုုပ် မလုုပ်လုုပ် Standard ဆုုိတာ ရှိမှာပါ .. သုုံးလိုု့ဘာတွေ ဖြစ်လာမယ် ဘယ်ဟာကတော့ ဘယ်လိုု ဖြစ်သွားမယ် အဲဒါတွေကိုု သိဖိုု့တော့လိုုပါတယ်။
www.google.co.mm ကိုသုံးမယ့်လူ သုံးယောက်တောင်မရှိဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လုပ်တာ အလကားဖြစ်သွားပြီပေါ့။
အပေါ်က Result ကိုုပဲ အရင် ကြည့်ပါဦး ။
Google ကိုုလည်း zawgyi နဲ့ ဘာသာ ပြန် .. ကျနော်တိုု့ zawgyi နဲ့ပဲ သုုံးပါမယ်လိုု့ မေးကြည့်ပါဦးလား
ယူနီကုတ် သွင်းပြီးရင် အရမ်းစိတ်ညစ်ရလို့။
ဟုုတ်သလားဗျာ.. တော်တော် မကောင်းတာပဲနော်
ဘယ်လိုလုပ် ဂူဂဲကနေ ဇော်ဂျီနဲ့ ယူနီကုဒ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်။ :rolleyes: လက်ရှိအားဖြင့်တော့ ဖြစ်ဖို့ကမရှိပါဘူးလေ သူလည်းဘာအကျိုး အမြတ်မှမရှိပဲဟာ ဒါပေမယ့် အဲလိုရှိတယ်လို့ဆိုကြပါစို့။ အဲဒါဝမ်းသာစရာ အသိအမှတ်ပြုစရာမဟုတ်ဘူးလား နောက်ပြီးတော့ သူလုပ်ထားတာက တစ်ကမ္ဘာလုံးလက်ခံတဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်နဲ့လုပ်ထားတာပဲလေ။ အဲဒါကိုငါတို့စက်ထဲက ဇော်ဂျီနဲ့မြင်ရဘူးကွလို့ ပြောဖို့သင့်တော်မှာပါလား။ ဗမာပြည်အတွက် သတ်သတ်မှတ်မှတ်တောင် လုပ်ပေးထားတာပဲ အဲဒါကိုဖောင့်လေး တစ်ခုထည့်ဖို့ဘာလို့ အတင်းငြင်းစရာမလိုပါဘူးဗျ။ ဇော်ဂျီကလည်း အော်တိုမစ်တစ် ပါလာတာမှမဟုတ်ပဲ သတ်သတ်ထည့်ထားတာပါ။ ဗမာပြည်ကဝင်လို့လို့ လေးဒေါင့်တွေနဲ့ ပေါ်နေတဲ့ ဂူဂဲကိုမြင်နေရရင် ဆိုင်တွေကဘာလို့ မထည့်ထားပဲရှိပါ့မလဲ။ ဇော်ဂျီမရှိလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် install လုပ်ပြီး ကြည့်ရတဲ့ခေတ် မရှိခဲ့ဘူးမထင်လိုက်ပါနဲ့။ ကျွန်တော့်ရဲ့ 256MB ThumbDrive လေးထဲမှာ ဇော်ဂျီဖောင့် ကူးထည့်ထားတာ အခုထိရှိပါသေးတယ်။ ဒါတွေဟာဘာမှ ကြီးမားလှတဲ့ပြဿနာတွေမှမဟုတ်ပဲ။ မရှိပဲ အရှိလုပ်ပြောရတာ မောတာ
နောက်တစ်ခု အကြံပေးချင်တာက တစ်ခုတည်းကို တရားသေမှတ်မထားပါနဲ့ လက်ရှိအနေအထားမှာ ယူနီကုဒ်ဖောင့်တွေဟာ ပုံနည်းနည်းဆိုးတယ် ကီးဘုတ်က User requirement အပြည့်ရအောင် တစ်ချို့နေရာတွေမှာ လုပ်ထားမပေးနိုင်ဘူး ဒါတွေဟာ ငြင်းလို့မရပါဘူး သူ့ရဲ့ချို့ယွင်းချက်တွေပါ။ အဲဒါဆို ဇော်ဂျီကရော ကောင်းလို့လားဆို လှတာကလွဲရင် ကျန်တာအကုန်ဆိုးတာ လက်မခံလို့မရပါဘူး။ လက်ရှိအနေအထားက ယူနီကုဒ်ပဲသုံး ဇော်ဂျီမသုံးနဲ့လို့ ဆိုရလောက်အောင်လည်း စောစောကလို ဂူဂဲကလည်း မြန်မာဒိုမိန်းနဲ့လည်းမရှိသေးပါဘူးလေ မိုက်ခရိုဆော့မှာလည်း မူလကတည်းက ယူနီကုဒ်ဖောင်တွေမှာ ဗမာစာတွေမထည့်သေးပါဘူး လင်းနစ်လည်းမထူးပါဘူးလေ အက်ပဲကလည်း ဗမာစာမပါသေးပါဘူး။ လက်ရှိအနေအထားမှာ ဇော်ဂျီနဲ့လုပ်ထားတဲ့ Product တွေ အားပေးစရာတွေရှိပါတယ် သုံးဖို့လည်းအားပေးပါတယ်။
ဇော်ဂျီကိုလက်ညှိုးထိုးပြ ပြီးတော့အဲဒါရှိလို့ ဒို့ဟာမသုံးတာအော်မယ့်အစား ယူနီကုဒ်ကလည်း သုံးချင်အောင် လိုအပ်ချက်တွေကို ပြင်သင့်တာပေါ့ ကိုယ့်ဟာကသူများထက်ကောင်းပေမယ့် သူများကောင်းတဲ့အပိုင်းညံ့ရင်လည်း လူပြောစရာအင်မတန်ဖြစ်တယ်။ ဇော်ဂျီနဲ့လုပ်နေတဲ့လူတွေကလည်း ဒို့ဟာပျောက်မယ်ဆိုပြီး ယူနီကုဒ်မသုံးရေး လျောက်မပြောသင့်ဘူး ယူနီကုဒ်သုံးဖို့ကြိုးစားတာကို ဟန့်တားချင်တာဆိုရင်တော့ အင်မတန်ကိုဆိုးဝါးတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာမှာ စကားလုံးလေးမြင်ဖို့ထက်ပိုတဲ့ ကိစ္စတွေအများကြီးကျန်တယ် ဒီတော့တစ်ချိန်မှာတော့ ယူနီကုဒ်ပြောင်းသုံးဖို့လိုရင် ပြောင်းရမယ်ဆိုတာကို မျက်စေ့မှိတ်မငြင်းမိဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ အရေးကြီးတာက နားမလည်တဲ့လူကိုမလိမ်ဖို့ပဲ ကိုယ့်ပစ္စည်းအတွက် အမှားတွေပြောပြီးမစည်းရုံးဖို့ ချို့ယွင်းချက်ချက်ကိုလည်း သူများကိုလက်ညှိုးမထိုးပဲ တစ်ဘက်ထက်ကောင်းအောင် လုပ်ရင်ဝမ်းသာစရာပါ။ မြန်မာစာအတွက်လို့ သဘောထား စေတနာထားရင် အကုန်အဆင်ပြေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကစာတွေပါ ဗမာစာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး ဆိုတာလည်း အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။
You can see other country that is still sanction @
ကျွန်တော် ဇော်ဂျီက restart မချရဘူးလို့မရေးထားပါ။
e.g...မြန်မာတွေရဲ့ ၀ီကီ။ (ဇော်ဂျီ ဗားရှင်းနှင့် မြန်မာယူနီကုတ်ဗားရှင်း ဘယ်သူဘယ်ဟာသုံးလည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။)
ဇော်ဂျီက restart မချရဘူးလို့ရေးမထားပါဘူး။
အရေးကြီးတာက နားမလည်တဲ့လူကိုမလိမ်ဖို့ပဲ ကိုယ့်ပစ္စည်းအတွက် အမှားတွေပြောပြီးမစည်းရုံးဖို့ ချို့ယွင်းချက်ချက်ကိုလည်း သူများကိုလက်ညှိုးမထိုးပဲ တစ်ဘက်ထက်ကောင်းအောင် လုပ်ရင်ဝမ်းသာစရာပါ။
ကျွန်တော်လိမ်နေတာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော် သိချင်လို့ poll တင်ထားတာပါ။
ဇော်ဂျီကိုလက်ညှိုးထိုးပြ ပြီးတော့အဲဒါရှိလို့ ဒို့ဟာမသုံးတာအော်မယ့်အစား ယူနီကုဒ်ကလည်း သုံးချင်အောင် လိုအပ်ချက်တွေကို ပြင်သင့်တာပေါ့ ကိုယ့်ဟာကသူများထက်ကောင်းပေမယ့် သူများကောင်းတဲ့အပိုင်းညံ့ရင်လည်း လူပြောစရာအင်မတန်ဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်လည်းသိပါတယ် တစ်ချိန်ကျရင် ယူနီကုတ်က အောင်မြင်မယ်လို့။ ဒါပေမယ့် လုပ််တဲ့လူတွေက အားမရချင်စရာ။ ကိုယ့်အကျိုးကိုယ့်အတွက်ပဲကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ အားနည်းချက်တွေ မပြင်ကြဘူး။ သူတို့မသိလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့က Standard ဆိုတဲ့ အနောက်ကို လိုက်လွန်းအားကြီးသွားလို့ဖြစ်သွားတာပါ။
ဒီပိုစ့် ကို ပြန်ဖြေဖို့အတွက် ဒေတာ ရှာတာ သုံးရက်လောက်ကြာသွားတယ်။ ဟူး
်မဆိုးဘူးပဲ သုံးမယ့်လူတော်တော်များတာပဲ။ ဒါဆိုလည်း ၀ုိင်းရိုက်ကြမယ်လေ။ အမ်ဇက် က လုပ်ရင် မအောင်မြင်တဲံ့ ပရောဂျက်နည်းပါတယ်။
ကဲကဲ အားလုံးပဲ ဂျီတော့လေးနဲ့ q နေတာတို့၊ နိုင်ငံခြားကို လေ့လာရေးခရီးသွားတာတို့ ကိုရပ်ပြီး အားလုံး အတွက် အသုံးတည့်မယ့် www.google.co.mm ကိုပဲ ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ကြပါတော့ဗျား။ ကျွန်တော်လည်းအားရင် အားသလောက် ဇော်ဂျီ နဲ့၀င်ရိုက်နေပါတယ်။
About it Sanction , I've talked about Ko Sean ( wasaDeveloper Advocate from Google )
သူတိုု့ဆီက လုုပ်တဲ့ Contest တစ်ခုကိုု ၀င်ပြိုင်တာတောင်မှာ Address မှာ Singapore လိုု့ထည့်ပီးမှာ ၀င်ပြိုင်ရတယ် .. နောက် သူ့ဆီက Support တွေ ပေးမယ် ( e.g. Nexus One, Evo 4G အဲဒါတွေကိုု
Developer တွေကိုု ပေးမယ် )
ဆုုိတာတောင် Developer တစ်ယောက်ဟာ မြန်မာနိုုင်ငံမှာ ရှိနေသမျှ မရပါဖူးတဲ့. စင်ကာပူကိုုလာ လက်မှတ်ထိုုး စင်ကာပူမှာပဲ နေမှာ အဲဒီလိုု Support တွေ ပေးနိုုင်မှာပါတဲ့
.မြန်မာတွေရဲ့ ၀ီကီ။ (ဇော်ဂျီ ဗားရှင်းနှင့် မြန်မာယူနီကုတ်ဗားရှင်း ဘယ်သူဘယ်ဟာသုံးလည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။)
မြန်မာ Wiki ကို ဇော်ဂျီနဲ့လည်း မဖတ်ဖူး Unicode နဲ့လည်း မဖတ်ဖူး . တစ်ခါမှတောင် သွားမကြည့်ပါဖူး . Local Site တွေမှာ သတင်းဆိုုက် နဲ့ Blog တွေက လွဲလိုု့ မဖတ်ပါ ။
ကိုုယ့်မှာ အခက်အခက်ရှိလို့ မေးချင်ရင်တောင် SuperUser နဲ့ Stackoverflow ကိုုပဲသွားမေးပါတယ်။ ပြောချင်တာက ကိုုယ့်အတွက် အဆင်ပြေမယ် အလွယ်ဆုုံး အမြန်ဆုုံးနဲ့ problem Solve လုုပ်နိုုင်မယ့် နည်း
Product တစ်ကယ် ထွက်လာနိုုင်တဲ့ Duct Tape Programmer ကိုုပဲ လုုပ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်ကျရင် ယူနီကုတ်က အောင်မြင်မယ်လို့။ ဒါပေမယ့် လုပ််တဲ့လူတွေက အားမရချင်စရာ။ ကိုယ့်အကျိုးကိုယ့်အတွက်ပဲကြည့်တယ်။
I've no idea about what you mean. but I thought it's related with an interview you've read ..
ကျွန်တော် အလုပ်ရတဲ့ အကြောင်း အလုပ်မရတဲ့အကြောင်းမပြောပါဘူး ကျွန်တော်ပြောချင်တာက Sanction ရှိပြီး google က ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာကိုပြောနေတာပါ။
တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ sanction အကြောင်းပြော၇တော့မယ့်ပုံပေါက်နေတယ်။